सोनिकाले मान्छे मा’र्छु भन्दै ध’म्कि दिएपछि, राम गौतमआए मिडियामा……. (भिडियो सहित) – Khabar PatrikaNp
सोनिकाले मान्छे मा’र्छु भन्दै ध’म्कि दिएपछि, राम गौतमआए मिडियामा……. (भिडियो सहित)
काठमाडौ । युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकायले दुई दिन अघि सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लाइभ आएर दिएको अभिब्यक्ति अहिले विवादित बनेको छ । उनी निकै वि’छिप्त अवस्थामा लाइभमा देखिएकी थिइन् । एक जना राम गौतमको नाम लिएर उनलाई औका’तमा बस्न भन्दै चेता’वनी दिएकी थिइन् । बालबालिकालाई क’रणी गरेको ग’म्भिर आ’रोप लगाउँदै उनलाई ज्या’न लिने ध’म्की पनि लाइभमै दिएकी थिइन् । उनको त्यो अभि’ब्यक्ति अहिले विवा’दित बनेको छ ।
उनले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरेका शब्द आम महिलाले सुन्न पनि नसकिने खालका थिए । युट्युवमा दुई अर्थ दिने शब्द प्रयोग गर्दै भिडियो बनाएका कारण वि’वादित बनेकी रोकाय केही समय यता आफु अब त्यस्तो बाटोमा नलाग्ने भन्दै आफ्नो कार्यक्रमको शैली परिवर्तन गर्दै आएकी थिइन् । लक’डाउन सुरु भएपछि आफ्नो गृह जिल्ला बझागं पुगेकी उनले त्यहाँवाट पनि भिडियो सार्वजनिक गर्दै आएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय फेरी पूर्व युवाराज पारस शाहसंगको सम्बन्धका कारण पनि वि’वादित बनेकी थिइन् । उनले पारसका भिडियो पनि आफ्नो युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएकी थिइन् । तर फेरी उनीहरुको सम्बन्ध वि’ग्रिएको कुरा पनि सार्व’जनिक भएको थियो । बझागंमा रहेकी सोनिकाले आफ्नै घरवाट फेसवुक लाइभमा आएर राम गौतम विरु’द्ध त्यती आ’क्रोशित भएकी हुन् । उनले त्यसवारेमा केही खुलाएकी भने छैनन् ।
उनले भिडियोमा उनले आफु ९ वर्ष डि प्रेशनमा बिताएको पनि स्वीकार गरेकी छैनन् । उनलाई संगै रहेकी आमाले रोक्न खोज्दा आमालाई पनि रोकेकी छन् । यसै विषयमा राम गौतमले पनि प्रतिकृया दिएका छन् । उनले सोनिकाको भिडियो आफ्नो छोराले हेर्ने गरेको बताएका छन् । रामको छोराले सोनिकाको भिडियोको काम गर्ने भएकाले त्यसको पैसा माग्दा नदिने गरेको उनको भनाई छ । त्यसै विषयमा सोनिकासंग वि’वाद उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
रामका छोराले सोनिकाको भिडियोको एडिट गरेर युट्युवमा अपलोड गर्ने गरेका थिए । सुरुमा महिनाको २० हजार रुपैया दिने भनेर सम्झौता भएपनि फागुन महिना यता पैसा नदिएको उनको आ’रोप छ । तर त्यही विषयमा आफुले लिनुपर्ने पैसाको हिसाव पठाए पछि वि’वाद उत्पन्न भएको बताएका छन् । राम गौतम पुराना चलचि’त्रकर्मी र कलाकार हुन् ।
Prevयस्ता गुण भएकी नारी घरमा छिन् भने मान्नुस् तपाईंको घर स्वर्ग समान……..
Nextपारिजात फूलको महत्व ……….जानी राखौं
नेकपाको सरकार समानता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ : प्रधानमन्त्री